I-Apple iphumelele iBhaso leNkonzo yaBathengi beGolide ku-Twitter IPhone iindaba
I-Apple iphumelele ibhaso leNkonzo yaBathengi bakaGolide ye-Twitter
UAlvaro Fuentes | | Izaziso, Ezahlukeneyo
I-Twitter ibhengeze iziphumo zenyathelo lokuqala le- #Awards, ibiza iApple njengomboneleli ophambili wenkonzo yabathengi kumaqonga eendaba ezentlalo. U-Apple wanikwa ibhaso le #Customer "Gold" nge-akhawunti yakhe ka @AppleSupport kuTwitter, ethi isetyenziswe yinkampani ukuphendula ngokukhawuleza izicelo zenkxaso yabathengi. NgokukaTwitter, iakhawunti yeAppleSupport ikwindawo yokuqala phakathi kweeakhawunti zenkxaso yabalandeli, eqokelela ukuthandwa kwe-150.000 kunye nokuphindaphinda okoko kwasungulwa.
Ixesha lokuphendula eliphakathi kwinkonzo yabathengi kwi-Intanethi lide, malunga neeyure ezili-17. Ukukhanya koku, @AppleSupport uthathe isigqibo sokwenza into malunga nelo nani libuhlungu kunye nokukhuthaza ukusetyenziswa kwe-Twitter ukuphendula imibuzo yabathengi nakwezinye izimvo. Ngenxa yobume obuguqukayo be-Twitter, iqela lenkxaso lika-Apple liyakwazi ukubandakanyeka kwiincoko zabathengi nangaliphi na ixesha kwaye libandakanya imithombo yeendaba etyebileyo ukubonelela ngoncedo ngakumbi ebantwini nini kwaye phi abayifuna kakhulu.
UApple usungule iakhawunti yeNkxaso yeApple kwiTwitter ngo-Matshi 2016, eyenza ukuba ibeyinkxaso-mali yokuqala kwindawo yokuncokola. Sebenzisa le akhawunti yeNkxaso yeApple ukuphendula imibuzo yabathengi, unike inkxaso, kwaye unike abathengi beApple iingcebiso kunye namacebo okusebenzisa iimveliso zeApple. I-Apple inxibelelana ngokuthe ngqo nabathengi bayo ngeakhawunti yeNkxaso ye-Apple kwi-Twitter kwaye ibonelela ngezisombululo ezikhawulezayo kwiingxaki. Rhoqo amaxesha, iyaphendula kwezo zicelo nakwimizuzu nje embalwa. Ukusukela oko yasungulwa ngo-Matshi, inkxaso ye-Apple iakhawunti ye-Twitter ifumene ngaphezulu kwe-524.000 yabalandeli kwaye yabelana ngeengcebiso ezininzi zemveliso ezihlala zivelisa amakhulukhulu eefs kunye neempendulo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Apple iphumelele ibhaso leNkonzo yaBathengi bakaGolide ye-Twitter
I-Apple isungule ii-iPhones ezimbini ezinesentimitha ezintlanu kunye ne-5-intshi kwi-5.8, ngokutsho koPhando lweBarclays
INintendo ihlaziya usetyenziso lweMiitomo ngokwenziwa kwamagumbi okuncokola